News Collection: रविना र राजवल्लभबीच रोमान्स
रविना र राजवल्लभबीच रोमान्स
अविवाहित हिरो राजवल्लभ र काठमाडौंकी बैंकर्स महिला रविना जोशी (देशराज श्रेष्ठ)बीचको रोमान्सले यतिबेला काठमाडौंको बैंकिङ क्षेत्र र सिनेमा क्षेत्रमा चर्चा बटुलेको छ । बैंकर्स महिलाले खाजा खाने ठाउँमा यतिबेला राजवल्लभ र उनले चढ्ने रातो कारको गफ चलिरहेको हुन्छ । अधिकांश नेपाली फिल्म त्रिकोणात्मक कथामा आधारित हुन्छन् । राजवल्लभ थुप्रै त्रिकोणात्मक फिल्ममा हिरो पनि बने । तर, यतिबेला राजवल्लभ त्रिकोणात्मक होइन चतुर्थकोणात्मक रिएल लाइफका पात्र बनेका छन् । यो प्रसंग हो मेगा बैंकमा कन्ज्युमर बैंकिङ एन्ड कर्पोरेट अफेयस्रका रुपमा कार्यरत रविना देशराज श्रेष्ठ (जोशी)को । हिरोसँग रविनाको सोचेभन्दा बढी हिमचिम बढ्न थालेपछि हिजोआज सोही बैंकका कार्यकारी अधिकृत अनिल शाह पनि विक्षिप्त छन् । किनभने अनिल रविनालाई मनपराउँछन् । पहिला अनिल र रविना स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकमा सँगै काम गर्थे । त्यही बैंकमा रविनाका जोशी थरका पति पनि काम गर्थे । अनिलले स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक छाडेपछि रविनाले अनिलसँगै त्यो बैंक छाडिन् र दुवै त्यहाँबाट नबिल बैंकमा काम गर्न गए । नबिल बैंकमा काम गर्न थालेपछि नयाँ पुस्तामा चलेका हिरो राजवल्लभसँग रविनाको भेट भयो ।
रविनाको अफिस पुल्चोकमा राजवल्लभ बस्ने कुपण्डोलमा । यसले उनीहरुबीचको भेट गाढा हुन थाल्यो । यसपछि रविनाको प्रेम तीनबाट चार कोण लियो । राजवल्लभसँग रविनाको हिमचिम बढेको र राजवल्लभलाई रविनाले गाडी समेत किनिदिएको कुरा सुनेपछि पाटनका धनाढ्य जोशी र रविनाको डिभोर्स भयो ।
त्यसपछि रविना र अनिल दुवैले नाबिल बैंक छाडेर मेगा बैंकमा काम गर्न थाले । अनिलको साथमा रविनाले बैंकमा राम्रो पोजिसन पाइरहिन र उनले कमाएको पैसाबाट राजवल्लभ निरन्तर लाभान्वित हुँदै गए । हुँदा-हुँदा फुस्रद हुनासाथ रविना राजवल्लभसँग क्याफेतिर निस्कने घर आवत-जावत गर्ने र अनिलले भेट्न खोज्दा नभेटिने भएपछि क्रमशः अनिल रविनाप्रति निराशा बन्दै गएको मेगा बैंकका एकजना कर्मचारी बताउँछन् । रविनाले आफ्ना नजिकका साथीसँग राजवल्लभले आफूसँग चाँडै विवाह गर्न लागेको पनि बताउन थालेकी छन् जुन कुरा अनिलको कानमा पुगिसकेको छ । यतिन्जेलसम्म बैंकमा काम गर्नेहरुले अनिललाई कुरा लगाइसकेका छन् कि 'अविवाहित हिरो पाएपछि विवाहित मान्छेको घरबार बिगार्न कुनचाहिँ स्त्री पछाडि पर्छन् र ? के सबैजना किशोर महर्जनसँग जोडी बाँधिने सिर्जना जोशीजस्ता हुन्छन् र ?'
यतिबेला रविनाका १२ वर्षे एकजना छोरा पनि छन् । उनका अधिकांश साथीले राजवल्लभलाई भावी पतिका रुपमा हेरेका छन् । यहाँसम्मकी उनीसँग सम्बन्धित कुनै जमघट भए राजवल्लभ छुट्दैनन् । त्यस्ता जमघटमा राजवल्लभसँग रविनाको उन्मुक्त चुम्बन हुने गर्छ । राजवल्लभ भने लजालु शैलीमा उनको चुम्वन स्वीकार्ने गर्छन् । रविना यो सम्बन्धलाई आफ्ना साथीभाइमाझ बढी नै चर्चामा ल्याउन रुचाउँछिन् भने उनका कुरा फेसबुकमा प्रसारित मोबाइल अपलोडबाटै प्रष्टिन्छ । तर राजवल्लभ भने सकेसम्म यो सम्बन्ध त्यसप्रकारको नभएको देखाउन रुचाउँछन् । पतिले घरपरिवार र इज्जतको ख्याल नगरी अर्को केटासँग लागेको भन्दै सम्बन्धविच्छेद गरेपछि उनलाई आफन्तले नै हेर्ने नजर बद्लिएको थियो । त्यसपछि उनले पहिलेदेखि नै मित्रता रहेका राजवल्लभसँगको सम्बन्धलाई बढी प्रचारमा ल्याएकी हुन् । एकजना आफन्त भन्छन् -सम्पत्ति भएको लोग्ने छाडेर रुप र नाम कमाएको युवक रोज्ने होडबाजी आजकलका सहरी महिलाबीच प्रतिस्पर्धाझैं चल्ने गरेको छ । उनी त्यो प्रतिस्पर्धामा अन्य साथीभन्दा अगाडि छिन् ।
रविनासँगको सम्बन्धबारे मेरोसिनेमासँग कुरा गर्दा राजवल्लभले उनीसँग राम्रो मित्रता रहेको मात्र बताए । 'बाहिर आएका हल्ला गसिप मात्र हुन्' राजवल्लभ भन्छन् 'कसले के भन्यो त्यो सरोकारको विषय होइन ।' सामान्य मित्रतालाई प्रेमका रुपमा हेर्ने प्रवृत्तिप्रति उनले असन्तुष्टि पनि जनाए । 'साथी जो पनि हुनसक्छन्, त्यसमा पनि हामी सार्वजनिक रुपमा चिनिएको मान्छेलाई साथी बनाउन रुचाउने थुप्रै पुरुष वा महिला हुन्छन्' उनले भने ।
'जनआस्था साप्ताहिक'को सहयोगमा